बौद्धिक सम्पत्ति कानून आइन्डहोभेन र एम्स्टर्डम
बौद्धिक सम्पत्ती (आईपी) कानून
अन्य मानिसहरूलाई तपाइँको काम प्रयोग गर्नबाट रोक्नको लागि, बौद्धिक सम्पत्ति कानूनले तपाइँको विकसित विचारहरू र रचनात्मक अवधारणाहरूको रक्षा गर्न अवसर प्रदान गर्दछ। यसको मतलब यो छ कि तपाईंको सिर्जनाहरू केवल तपाईंको अनुमतिको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो विशेष गरी हाम्रो द्रुत परिवर्तनशील र नवीन समाजमा महत्त्वपूर्ण छ। के तपाई बौद्धिक सम्पत्ती कानूनको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
के तपाईं एक विकासकर्ता हुनुहुन्छ?
तपाईंको सिर्जना संरक्षण गर्नुहोस्
बौद्धिक सम्पत्ति कानून
अन्य मानिसहरूलाई तपाइँको काम प्रयोग गर्नबाट रोक्नको लागि, बौद्धिक सम्पत्ति कानूनले तपाइँको विकसित विचारहरू र रचनात्मक अवधारणाहरूको रक्षा गर्न अवसर प्रदान गर्दछ। यसको मतलब यो छ कि तपाईंको सिर्जनाहरू केवल तपाईंको अनुमतिको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो विशेष गरी हाम्रो द्रुत परिवर्तनशील र नवीन समाजमा महत्त्वपूर्ण छ।
> विभिन्न सम्पत्ती अधिकार
के तपाई बौद्धिक सम्पत्ती कानूनको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ? मा विशेषज्ञहरु Law & More कानूनी सहायता प्रदान गर्न सक्दछ यदि तपाईं आफ्नो विचार वा रचनाहरू बचाउन चाहानुहुन्छ। यदि तपाईंले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने, हामी तपाईंलाई बौद्धिक सम्पत्ति को पंजीकरणमा सहयोग गर्नेछौं र हामी तपाईंको तर्फबाट कुनै पनि उल्लंघनकर्ता विरूद्ध कार्य गर्नेछौं। बौद्धिक सम्पत्ति कानूनको क्षेत्रमा हाम्रो विशेषज्ञता हो:
• प्रतिलिपि अधिकार;
Ate प्याटेन्टहरू र प्याटेन्टहरू;
• व्यापार नामहरू
प्रतिलिपि अधिकार वकिल
के तपाईं किताब, फिल्म, संगीत, चित्र, फोटो वा मूर्तिकलाको मालिक हुनुहुन्छ? हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्
के तपाइँ तपाइँको उत्पादन वा सेवा दर्ता गर्न चाहानुहुन्छ? हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं
पेटन्टको लागि आवेदन दिनुहोस्
के तपाई आविष्कारका मालिक हुनुहुन्छ? प्याटेन्ट मिलाउनुहोस्
हामी तपाईंलाई तपाईंको व्यापारको नाम दर्ता गर्न मद्दत गर्दछौं
संलग्न छ र
यो ग्राहकको समस्या हो। "
यदि तपाईं एक आविष्कारक, डिजाइनर, विकासकर्ता वा लेखक हुनुहुन्छ भने, तपाईं बौद्धिक सम्पत्ति कानून मार्फत तपाईंको कामको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति कानूनले सुनिश्चित गर्दछ कि अरूले तपाईंको सिर्जनाहरू प्रयोग नगर्न सक्छन् जब सम्म तपाईं त्यसो गर्न अनुमति दिनुहुन्न। यसले तपाईंलाई उत्पादनको विकासमा तपाईंको लगानी पुनःपूर्ति गर्ने अवसर दिन्छ। सुरक्षा प्राप्त गर्न, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंसँग विस्तृत विचार हो। एकल विचार मात्र पर्याप्त छैन, किनकि यसमा धेरै तरिकाहरूबाट काम गर्न सकिन्छ। जब तपाईंसँग विकसित विचार छ, हाम्रो वकिलहरूले तपाईंको बौद्धिक सम्पत्ती बिभिन्न तरीकाले रेकर्ड गर्न सक्दछन्। त्यहाँ बौद्धिक सम्पत्ती कानूनका बिभिन्न प्रकार छन्, जुन अलग वा संयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
विभिन्न सम्पत्ती अधिकार
त्यहाँ बौद्धिक सम्पत्ति कानूनका विभिन्न प्रकारहरू छन्, प्रकृति, क्षेत्र र अवधि जुन एक सम्पत्तिबाट अर्कोमा फरक हुन्छ। कहिलेकाँही धेरै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू एकै समयमा दर्ता गर्न सकिन्छ। Law & Moreबौद्धिक सम्पत्ती कानूनको क्षेत्रको विशेषज्ञतामा प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क कानून, प्याटेन्टहरू र प्याटेन्टहरू र ट्रेड नामहरू समावेश छन्। सम्पर्क गरेर Law & More तपाईं सम्भावनाहरूको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ।
प्रतिलिपि अधिकारले सृष्टिकर्ताका कार्यहरू सुरक्षित गर्दछ र सृष्टिकर्तालाई प्रकाशित गर्न, पुन: उत्पादन गर्न र तेस्रो पक्षहरू द्वारा दुरुपयोगबाट आफ्नो कार्यको रक्षा गर्न अधिकार दिन्छ। शब्द 'काम' मा पुस्तकहरू, चलचित्रहरू, संगीत, चित्रकलाहरू, फोटोहरू र मूर्तिकलाहरू सामेल छन्। यद्यपि प्रतिलिपि अधिकारको लागि लागु गर्न आवश्यक पर्दैन, जब यो कार्य स्वतः सिर्जना हुने बित्तिकै देखा पर्दछ, प्रतिलिपि अधिकार रेकर्ड गर्न सुझाव दिइन्छ। सही स्थापना गर्न, तपाई जहिले पनि यो प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ कि काम निश्चित मितिमा अवस्थित थियो। के तपाइँ तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार दर्ता गर्न र तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार उल्लge्घन गर्ने व्यक्ति विरुद्ध तपाइँको कार्य सुरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ? कृपया वकिललाई सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More.
ट्रेडमार्क कानूनले तपाईको ट्रेडमार्कलाई दर्ता गर्न सम्भव बनाउँदछ, ताकि कोही तपाईको नाम बिना तपाईको नाम प्रयोग गर्न सक्दछ। ट्रेडमार्क अधिकार मात्र पुष्टि हुन्छ यदि तपाईं ट्रेडमार्क रजिस्टरमा ट्रेडमार्क रेजिस्टर गर्नुहुन्छ। Law & Moreयसका वकिलहरु तपाईलाई सहयोग गर्न खुशी छन्। यदि तपाईंको ट्रेडमार्क रजिष्टर गरिएको छ र तपाईंको अनुमति बिना प्रयोग गरिएको छ भने, यो ट्रेडमार्क उल्ल .्घन हो। तपाइँको Law & More वकील तब तपाईं उल्लंघनकर्ता विरुद्ध कारवाही गर्न सहयोग गर्न सक्षम हुनेछ।
प्याटेन्टहरू र प्याटेन्टहरू
एकचोटि तपाईंले आविष्कार, टेक्निकल उत्पादन वा प्रक्रिया विकास गर्नुभयो, तपाईं प्याटेन्टको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। प्याटेन्टले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँसँग तपाइँको आविष्कार, उत्पादन वा प्रक्रियामा विशेष अधिकार छ। प्याटेन्टको लागि आवेदन दिनको लागि तपाईले चार आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ:
; यो आविष्कार हुनुपर्छ।
; आविष्कार नया हुनुपर्दछ;
• त्यहाँ एक आविष्कारक कदम हुनुपर्दछ। यसको मतलव तपाईको आविष्कार नवीन हुनुपर्दछ र अवस्थित उत्पादनमा सानो सुधार मात्र हुनुपर्दैन।
। तपाईंको आविष्कार औद्योगिक रूपमा लागू हुनुपर्दछ।
Law & More जाँच गर्दछ कि तपाईं सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ र तपाईंलाई प्याटेन्टको लागि आवेदन दिन मद्दत गर्दछ।
एउटा ट्रेड नाम त्यो नाम हो जस अन्तर्गत एउटा कम्पनी चल्दछ। व्यापार नाम ब्रान्डको नाम जस्तै हुन सक्छ, तर त्यो सधैं केस नै हुँदैन। वाणिज्य नामहरू उनीहरुलाई वाणिज्य च्याम्बरमा दर्ता गरेर सुरक्षित गर्न सकिन्छ। प्रतियोगीहरूलाई तपाईंको ट्रेड नाम प्रयोग गर्न अनुमति छैन। व्यावासायिक नामहरू जुन तपाईंको ट्रेड नामसँग मिल्दोजुल्दो मिल्दो छ पनि अनुमति छैन। जे होस्, यो सुरक्षा क्षेत्रीय रूपमा बाध्य छ। अर्को क्षेत्रका कम्पनीहरूले उस्तै वा उस्तै नाम प्रयोग गर्न सक्दछन्। यद्यपि एक ट्रेड नामलाई ट्रेडमार्कको रूपमा दर्ता गरेर थप सुरक्षा दिन सकिन्छ। मा वकिलहरु Law & More संभावनाहरूमा तपाईंलाई सल्लाह दिन खुसी हुनेछ।
के तपाई बौद्धिक सम्पत्ती वकिलको खोजीमा हुनुहुन्छ? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More। हामी तपाईंलाई तपाईंको अधिकार स्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं र तपाईंको अधिकारहरू उल्ल inf्घन भएमा तपाईंलाई समर्थन गर्दछौं।